चाडबाड : सुलभ पसलका गुणस्तर र मापन - Demo Khabar
चाडबाडको मौसम आएको छ । मानिसमा पूर्ववत् जाँगर, विश्वास, उत्साह तथा उल्लास छैन । दिनहुँ बढ्दो कोरोना (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणले अशान्त आम–मनलाई चाडबाड तथा पर्वले केही न केही उमङ्ग त दिने नै छ तर चाडपर्वको मनस्थिति छैन । महाव्याधीको बेला, रोग एउटा समस्या हो भने त्यसले उत्पन्न गर्ने हतासा, कुण्ठा र वैराग्य अर्का समस्या हुन् ।
त्यसैले पनि मनलाई सन्तुलित, आनन्दित र चङ्ग राख्न विभिन्न साधन प्रयोग गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ । हो, यसका लागि चाडबाड तथा पर्वउत्सव प्रभावकारी साधन हुन् तर चाडपर्व कसरी मनाउने ? खर्चको जोहो कसरी गर्ने ? तनाव छ । सरकारले जनअवस्था मनन गरेको छ त्यसैले चाडबाडको सहजताका लागि सस्तो मूल्यमा वस्तु पाइने पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो बेला दैनिक काममा आधारित कतिपय श्रमिकले काम गुमाएकाले पनि यस्ता पसलले उनीहरूलाई विशेष राहत दिनेछ ।
आसन्न दशैँ, तिहार, छठलगायतका चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले देशका विभिन्न स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेका छन् । यस्ता पसलमा सहुलियत दरमा सामान किन्न पाइने र अरू बजारको जस्तो भीडभाड नहुने भएकाले आमउपभोक्ता लाभान्वित पनि हुनेछन् । बजार प्रतिस्पर्धा मध्यनजर गरेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले अनलाइन सेवा पनि सुरु गरेको छ । भीडभाड र अवाञ्छित मूल्यबाट उपभोक्तालाई यसबाट सहयोग पुग्नेछ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको सहकार्यमा ती संस्थाका कार्यालय, डिपो, डिलर तथा घुम्ती पसलमार्फत सुलभ दरमा खाद्यवस्तु किन्न पाइने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका थापाथली, कोटेश्वर, सतुङ्गल, ललितपुरको प्रयागपोखरी, नख्खु, भक्तपुरलगायत १६ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको छ । उपत्यका बाहिर बनेपा, विराटनगर, राजविराज, लाहानसहित ६५ स्थानमा यस्ता पसल सञ्चालन गरिएको छ । यस्ता पसल सञ्चालन गर्नु स्वागतयोग्य भए पनि पसलको सङ्ख्या चाहिँ न्यून नै छन् ।
दुग्ध विकास संस्थान र सिंहदरबार वैद्यखानालगायतकोे संयुक्त पहलमा पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नु थप प्रभावकारी हुनेछ । आगामी दिन निजी तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थाले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा धेरैभन्दा धेरै स्थानमा यस्ता पसल खोल्नुपर्छ । उपत्यकाका १६ स्थान आमउपभोक्ताको पहँुच बाहिरै छन् । यस्ता पसल स्थानीय तहको पहलमा टोलटोलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । उपभोक्तालाई पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाको अनुभूति दिएर खोलिनुपर्छ यस्ता पसल ।
सुपथ मूल्यमा सामग्री बिक्री गर्दा व्यापारीले मनोमानी गर्न पाउँदैनन् भन्ने विश्वासमा यस्ता पसल खोलिएका भए पनि सानो सङ्ख्या र सीमित क्षेत्रमा यस्ता पसल भएकाले अपेक्षित उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।
दशैँको बेला मात्र सहुलियत तथा सुलभ पसल खुलाउने परम्परा नियमित राख्नु मात्र ठूलो काम होइन । नेपालको संविधान तथा कानुनले गुणस्तरीय सामग्री तथा उपभोक्ता अधिकारका बारेमा यथेष्ट व्यवस्था गरेको छ तर सम्बन्धित निकायको व्यवस्थापन चिन्ताजनक छ ।
यही असोजमा समेत काठमाडौँ, म्याग्दी, खोटाङ, नेपालगञ्जमा म्याद नाघेका खाद्यान्नमा नयाँ म्याद (मिति) राखेर बजारमा खाद्यवस्तु ल्याइएको पाइयो । यस्तो प्रवृत्ति निरन्तर छ । हरेक वर्ष यस्ता घटना दोहोरिने तर नियन्त्रण नहुने ? ‘म पिटझैँ गर्छु, तँ रोएझैँ गर्नु’ भन्ने उखान सरकारी निकायले कहिलेसम्म चरितार्थ गर्ने
हो ? सम्बद्ध कर्मचारीले नियमित अनुगमनसहितको कर्तव्य पूरा गरेनन् भने तिनकै परिवारले सराप्नेछन् । अनि, विद्यमान विषम अवस्थामा व्यापारीहरूको पनि देश र उपभोक्ताप्रति विशेष कर्तव्य रहेका
छैनन् ? व्यापारी भनेका जुनसुकै धन्दा गरेर पनि पैसा कमाउने वर्ग होइन भन्ने छाप आमउपभोक्तामा पार्ने पहिलो कर्तव्य व्यापारीमै छ । केही पात्र–प्रवृत्तिका कारण नेपालको बजारसम्बद्ध व्यापारी र कर्मचारीलाई सर्वसाधारणका अगाडि प्रतिष्ठापूर्ण हुन नसक्ने अवस्था दुःखद हो ।
विद्यमान कानुनका अधीनमा रहेर सबै व्यापारीले आफ्ना व्यवसायबाट मुनाफा लिन सक्ने अवसर राज्यले दिएको छ तर व्यापार गर्न पाएको प्रमाणपत्र उपभोक्तालाई आघात गर्न दिइएको हतियार होइन भन्नेमा व्यापारी तथा आबद्ध कर्मचारी जानकार हुनुपर्छ । उपभोक्ता पनि यस्ता विषयमा सचेत हुनुपर्छ ।
शुक्रवार, आश्विन २३ २०७७०७:२०:०५